Delta-8 THC Wuxuu Helaa Caan Ka Badan - Laakiin Waa Maxay? • Dawooyinka Inc.eu
Delta-8 THC waxay ku sii kordheysaa caan - laakiin waa maxay?
In kasta oo kumaankun sano oo xashiishad ah la isticmaalay lana beeray, haddana aqoonta aan u leenahay xeryaha dhirta weli si naxdin leh ayaan loo horumarin. In kasta oo laga yaabo inaan ogaanno in geedku ka badan yahay 100 cannabinoids inteena badani waxay maqashay dhawr uun: THC en CBD.
1 Waa maxay Delta-8 THC?
2 Delta-8 THC Alaabada iyo Sharciga
3 Guryaha caafimaad ee suurtogalka ah ee Delta-8 THC
4 Khilaafaadka ururka Hemp Roundtable
Aqoon la'aani xitaa waxay ku sii fideysaa bulshada cilmiga leh, halkaas oo cilmi baarista xashiishadda ay si weyn u caqabad ku noqotay mamnuucida geedka muddo tobanaan sano ah. Si kastaba ha noqotee, cannabinoid kale ayaa sii kordheysa iftiinka: Delta-8 THC.
Waa maxay Delta-8 THC?
THC waxay noqotay tan ugu caansan xashiishadda, laakiin ereygan gaaban ayaa dhab ahaan loola jeedaa Delta-9-tetrahydrocannabinol. Waa tan ugu caansan ee cannabinoids ee laga helo geedka xashiishka, iyo sidoo kale xarunta nafsaaniga ah ee loo yaqaan soosaarida 'sare' ee dadka isticmaala xashiishka. Si kastaba ha noqotee, Delta-8 THC waa dhisme gebi ahaanba ka duwan.
Qaab dhismeedkan wuxuu la mid yahay kan Delta-9 THC - dhab ahaantii, waxaa jira dhowr farqi yar oo u dhexeeya labada cannabinoids.
Sida analogga 'THC', delta-8 THC sidoo kale waxaa lagu ogaadey inay soo saareyso heer sare oo u dhigma kan Delta-9 THC-ka caadiga ah. si kastaba ha noqotee, waxay leedahay awood maskaxeed oo ka hooseysa ina-adeerkeed oo caan ah. Sida kuwa kale ee loo yaqaan 'cannabinoids', waxay sidoo kale umuuqataa inay leeyihiin rajo dawayn iyo daaweyn.
Delta-8 THC waa mid ka mid ah afarta cannabinoids ee ugu badan ee ay soo saarto dhirta xashiishka, laakiin wali si dabiici ah ayey u jirtaa qadar aad u yar. Hase yeeshe, tani kama hor istaagin shirkadaha qaarkood inay horumariyaan siyaabo si guul leh looga soo saaro Cannabinoid-ka wax soo saarka.
Delta-8 THC Alaabada iyo Sharciga
In kasta oo delta-8 THC wali laga yaabo in aan si weyn loo aqoon, tafaariiqleyda wax soo saarka ayaa ka bilaabanaya Mareykanka, waana sii kordhayaan Europa, si loo xaqiijiyo kartidiisa. Tiro shirkado ah ayaa hadda iibiya badeecooyinka loo yaqaan 'vape' oo loo qoondeeyay walaxda, taas oo qaar ka mid ah dadka isticmaala madadaalada ay ku andacoodaan inay keenaan heer hoose oo ka hooseeya walaaca iyo jahwareerka.
In kasta oo waxaas oo dhami ay wanaagsanaan karaan, haddana arrinta sharci ahaanta ayaa xoogaa aan la hubin. Mareykanka dhexdiisa, waxaa la sheegaa in xarunta asal ahaan laga sharciyeeyay heer federaal iyadoo la raacayo Sharciga Beeraha ee 2018. Laakiin, waxaa jira khilaafaad badan oo ku saabsan sheegashooyinkaas.
Sidoo kale Boqortooyada Ingiriiska, tusaale ahaan, arrinta sharci ahaanta weli ma cadda. Ma jiro wax cad oo sheegaya tan gaar ah cannabinoid gudaha xaashida xaqiiqda ee dawladda loogu talagalay xashiishadda iyo cannabinoids oo ah shey laga dhaafay ama walax la kontoroolay. Sidaa darteed, badeecooyin badan oo iib ah ayaa u muuqda kuwo aan sharciyeysneyn oo tayo leh su'aal laga qabo - waxaa ugu wanaagsan inaad sugto sharaxaad dheeraad ah oo ku saabsan mawduuca ka hor intaadan tijaabin nasiibkaaga.
Guryaha caafimaad ee suurtogalka ah ee Delta-8 THC
Inkasta oo tafaariiqda delta-8 THC laga yaabo inaysan noqonin mid casri ah (ama sharci ahaan) sida aan rajeyneyno, waxaa jira horumarro rajo leh oo ku saabsan cilmi baarista. Daraasadaha qaarkood waxay muujiyeen in Cannabinoid-kani uu yeelan karo anti-emetic, anxiolytic, rabitaanka cuntada, kicinta iyo astaamaha neuroprotective.
Khilaafaadka ururka Hemp Roundtable
Ururku wuxuu dhowaan soo saaray bayaan ka dhan ah "badeecooyinka suuqgeynta, iyadoo la qarinayo magaca hemp, qiime kasta oo sarkhaan ama saameyn euphoric ah," oo ugu yeeray "mas'uuliyad darro".
Sida laga soo xigtay iyaga, Delta-8-tetrahydrocannabinol (THC) waxay dhawaanahan sameyneysay cinwaano cinwaano ah inay yihiin nooc ka soo baxa hemp oo sababi kara saameyn nafsi ah. Laakiin US Hemp Roundtable (USHR), oo ah koox u doodda shirkadaha, waxay leedahay taasi ma ahan wax wanaagsan.
In kasta oo USHR aysan si cad u xusin delta-8-THC bayaankeeda, haddana warsaxaafadeedku wuxuu ku xirmay laba maqaal oo sharraxaya waxa loogu yeero dalool - mid ka mid ah New York Times iyo mid kale oo ku jira Rolling Stone.
"Waxaad haysataa dawo muhiimad ahaan sare kuu qaadeysa, laakiin hadda waa mid gebi ahaanba sharci ah," ayuu yiri Lukas Gilkey, oo ah madaxa fulinta ee magaalada Texas ee ku taal magaaladaas, ayaa u sheegay NYT markii uu sharaxayey Delta-8 THC Wax walba waa lagu qosli karaa. "
Delta-8-THC waxaa si dabiici ah looga helaa uruurinta yar yar ee hemp, laakiin sidoo kale waa laga badali karaa CBD. Waa wax ay ka faa'iideystaan ​​farsameeyayaasha hemp - warbixin bishii Febraayo ka soo baxday hay'adda qiimeynta ee Hemp Benchmarks ayaa lagu ogaaday in qiimaha delta-8 distillate uu arkay socodkiisii ​​ugu horreeyay muddo XNUMX bilood ah. NYT waxay soo warineysaa inay tahay qaybta ugu dhakhsaha badan ee sii kordheysa ee alaabada hemp.
Guryaha caafimaadka ee suurtogalka ah ee Delta-8 THC - diidmada US Hemp Roundtable (afb.)
Si kastaba ha noqotee, muranka cannabinoid wuxuu muujinayaa kala-go 'kuwa ka shaqeeya kor u qaadista astaamaha daaweynta hemp halkii ay ka ahaan lahaayeen kuwa nafsadda leh.
"Si ka duwan marijuana, hemp waa qeexitaan ahaan ma ahan mid sakhraansan," USHR ayaa ku tiri bayaankeeda. "Wax soo saarka hemp sida CBD waxaa caan ku ah macaamiisha si ay uga faa'iideystaan ​​caafimaadkooda guud iyo samaqabka, mana ahan inay sare u qaadaan."
Hadalka USHR wuxuu imaanayaa sababtoo ah sharci ahaanta delta-8-THC waxaa wax laga weydiiyay maamulka maamulka sharci fulinta ee daroogada Mareykanka ee (DEA) ee finalka kumeelgaarka ah. Sharcigaas, oo hadda ay ku muransan yihiin maxkamadda Ururka Hemp Industries Association (HIA), ayaa laga yaabaa inuu albaabka u furo DEA si ay ula dagaallanto wax soo saarka delta-8, qareennada ayaa sheegay horaantii bishii Ogosto.
Ilo ay ka mid yihiin Canex (link), HempGrower (link), Weedmaps (link)
Americacaafimaadkaxagashasharci ahaancilmi baarisTHCBoqortooyada IngiriiskaMaraykankasharciga
Netherlands - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talo Sharci) (@ KHLA2014). Xagaagii lasoo dhaafay ayey soo laabatay…